Wararkii ugu dambeeyay ee Archives - Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Blog News Latest
Hoos waxaad ka heli doontaa liiska dhammaan jadwallada la soo saaray "Wararkii ugu dambeeyay"
Jacaylka iyo Awoodda Bogsashada ee Taabashada
adminaccount888 19th November 2020 News Latest
Jacaylka iyo awooda bogsiinta taabashada ayaa muhiim u ah samaqabkayaga maxaa yeelay waxay naga dhigayaan inaan dareemo amaan, daryeel iyo culeys yar. Goormaa kuugu dambeysay taabashadaada? Si aad wax badan uga ogaato, BBC waxay ku sameysay sahan loogu magac daray Taabashada Taabashada halkaan…
"Dhammaan waxqabadyada internetka, porno ayaa leh awoodda ugu badan ee lagu noqon karo balwad," ayay leeyihiin dhakhaatiirta neerfaha ee reer Holland Meerkerk et al. Maqnaanshaha sharciga xaqiijinta da'da iyo halista xirxirashooyin dheeri ah oo carruurtu ay mas'uul ka yihiin inay si xor ah u galaan goobaha galmada,…
Tilmaanta waalidiinta ee bilaashka ah ee cusboonaysiinta internetka-cudurka faafa ee faafa
adminaccount888 5th October 2020 Education, Caafimaadka, News Latest
Jadwalka Mawduucyada Guudmarka Guud ee Khatarta Porn ee Maskaxda Carruurnimada Maskaxda Autism Spectrum Disorder Video Fiidiyowyo Gaaban oo ku saabsan Badbaadinta Carruurta Documentary cusub oo Waalidiinta loogu talagalay Waalidiinta oo ku saabsan Saameynta Porn ee Carruurta Ka caawi wadahadalladaas adag Tilmaamaha ugu sarreeya ee lagula hadlayo carruurta…
'Breath Play' aka Strangulation oo si dhakhso leh u socota
adminaccount888 11th September 2020 News Latest
Waxay ahayd wax naxdin leh markii aan maqlay gabadh yar oo 14 jir ah oo iskuul dhigata oo noogu dhawaaqaysa inay tahay "mid jilicsan". Waxaan hor joognay 20 dhalinyaro kale ah oo kahadlaya halista ka imaankarta lebbiska internetka. Taasi waxay horey u jirtay seddex sano…
Shirka Xaqiijinta Da'da
adminaccount888 20th July 2020 News Latest
Hay'adda 'Reward Foundation' waxay xagaagii la shaqeysay John Carr, OBE, Xog-hayaha Isbahaysiga Samafalka Carruurta ee Boqortooyada Midowday ee Amniga Internetka, si loo soo saaro shirkii ugu horreeyay ee Xaqiijinta Da'da ee loogu talagalay filimmada. Waxay dhacday Juun 2020. Dhacdada waxaa ka mid ahaa…
Shirarka Caalamiga ah
Hay'adda Reward Foundation waxay kaqeybqaadaneysaa Isbaheysiga 2020 ee Joojinaya Ka Hortagga Galmada Isticmaalka Khadka Tooska ah ee Caalamiga ah inta udhaxeysa 18 iyo 28 Julaay. Iyadoo ay hadlayaan 177 iyo in kabadan 18,000 oo kasooqeybgala in kabadan 100 wadan, waa dhacdadii ugu balaarneyd abid in
Cilmi baaris 'Manifesto' oo loogu talagalay filimmada 'Pornography'
adminaccount888 16th May 2020 News Latest
Bishii Juun 2019 Dr Darryl Mead iyo Mary Sharpe waxay diyaariyeen mudaaharaad loogu talagalay cilmi-baarista qaawan. Waxaa lagu gaarsiiyay Shirka Caalamiga ah ee Ku-takoorka Akhlaaqda ee Yokohama, Japan. Baarayaasha TRF waxaa halkaan lagu arkaa Dr Marc Potenza iyo Gretchen Blycker…
Isbahaysiga Caalamiga ahi wuxuu ugu baaqayaa Shirkadaha Kaararka Waaweyn inay shaqada ku joojiyaan warshadaha Porn
adminaccount888 8th May 2020 News Latest
Badbaadada carruurta iyo u doodayaasha dhiig-miirashada ka-hortagga galmada iyo ururada ka socda Australia, Belgium, Bolivia, Canada, Denmark, England, India, Ireland, Liberia, Scotland, Sweden, Uganda, iyo Mareykanka Mareykanka ayaa warqad wada jir ah toddobaadkan ugu diray sumcad weyn. kaarka iyo lacag bixinta processing
adminaccount888 3rd April 2020 News Latest
Big Porn wuxuu doonayaa inuu ka faa'iideysto Faafida Fariintan martida ee faafa ee faafa waxay ka timid Madeleine Kearns, oo ah William F. Buckley Fellow oo ku takhasustay Suxufiga Siyaasadeed ee Machadka Dib u eegista Qaranka. Maqaalka asalka ah ayaa lagu arki karaa halkan. Iyada…
Xaqiijinta da'da ugu dhakhsaha badan?
adminaccount888 2da Abriil 2020 News Latest
Suurtagalnimada in Dowlada UK ay dhaqan galiso xaqiijinta da'da ugu dhakhsaha badan ee loogu talagalay galmada ayaa ku sii dhowaaneysa. Qaar ka mid ah shirkadaha rajada ka qabay inay bixiyaan nidaamka xaqiijinta da'da ayaa raadinaya dib u eegis xagga garsoorka ah. Tani waxay ku qasbi kartaa Dowladda inay wax ka qabato. ...